ဘ၀စာအုပ်ရဲ့ တစ်မျက်နှာ | htaikseng
htaikseng’s emotional life business blog
ဘ၀ဆိုတာ သမုဒ္ဒရာထက်က ရေပွက်ပမာဆိုပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ရှည်ကြာလွန်းလှပါတယ်။ စက္ကန့်အချိန်တွေပုံစုလို့ နှစ်တစ်ခုသာ ထပ်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ဘာလဲ။ ဘယ်လဲဆိုတာ ခုထိတော့ မြူခိုးတွေဝိုးဝါးတုန်းပါပဲ။ အခြား အသိကျွမ်းတွေလို ဘာလို့ ဘာဖြစ်ချင်တယ်။ ညာဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်လှမ်းမမြင်နိုင်ရတာလဲလို့ ကိုယ့်အတ္တကိုအကြိမ်ကြိမ် စာမေးပွဲစစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုထိတော့ အဲဒီကိုယ်တိုင်စစ်တဲ့ စာမေးပွဲကိုပဲ ကျွန်တော် အောင်အောင်မဖြေနိုင်သေးပါဘူး။
အတိတ်က………….ဟိုးအရင် ကျောင်းတက်နေတုန်း သန်လျင်တံတားပေါ်အဖြတ် လေအတိုက်၊ မိုးအလိုက် အခါတိုင်းမှာ သံသရာ သဘာဝအလှတွေကို ကျွန်တော်ချစ်တတ်ခဲ့တယ်။ အသားကို တိုးတိုးလေးကလိသွားတဲ့ အဲဒီရေငွေ့လေးတွေကို ကျွန်တော်မြတ်နိုးတတ်ခဲ့တယ်။ အိပ်ထောင်ထဲမှာ ထောင်တန်ထွက်ပြေးလို့ ဆာလောင်တဲ့ဒဏ်ကိုလည်း ကျွန်တော် မှတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မိုးသည်းတဲ့နေ့တွေ ကျောင်းထဲကို ပုဆိုးပေါက်ထိမပြီး အ၀တ်စိုစိုနဲ့ စာအုပ်တွေထိုင်ဖတ်၊ လေကန်ခဲ့တာလည်း ကျွန်တော် နှစ်သက်ခဲ့တယ်။ မိုးကြိုးလွှဲတတ်ထားတဲ့ကျောင်းခေါင်မိုးနားလျှောက်ပြီး မိုးကြိုးပစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပညာရှိဟန်ဖန်း ရမ်းတမ်းပြောခဲ့တာလည်း ကျွန်တော်မမေ့သေးဘူး။ လေးယောက်ပေါင်းမှ တစ်တန်း၊ အခန်းပိုင်မရှိ …… ပညာရှိဟန်ပီပီ စာအုပ်တွေ လိုင်ဘရီကချီခဲ့တာလည်း ပျော်စရာကောင်းသား………….။ ရထားစီးပြီးအပြန် သဘာဝဟန်တွေကို ရှုစား ငါးနာရီပဲကြာကြာ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးထိ စီးခဲ့တာလည်း ပြီးခဲ့ပြီပဲလေ။
အိမ်ကိုအံတု စာ စာ ဟုအော်ခဲ့တာလည်း နောင်တမရပါဘူး။ အသပြာတော့ မူးချင်ပေမယ့် ထူးတဲ့စာတွေ လေ့လာသင်ယူခဲ့ရတာပဲ။ စာတစ်မျက်နှာ ၀င်းအင်းဝစာလုံးတွေနဲ့ တစ်ညလုံးအချိန်ဖြုန်းခဲ့တာလည်း ခုအကျိုးထူးပြီလေ။ သိချင်တာတွေကို တိုင်ခံဖြေပေးတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ကိုလည်း ခုတော့ လွမ်းချင်ချင်ပါပဲ။ မှတ်မိပါသေးတယ်လေ။ ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းမဟာမှာ ပထမစတက်တော့ သူတို့တွေ ဆွေးနွေးတဲ့ ကွန်မြူနစ်၊ အရှေ့ကနေ၀န်း၊ ဗန်းမော်တင်အောင် စတာ စတာတွေကို မသိတဲ့ကျွန်တော် မတီးမိ မခေါက်မိတဲ့ကျွန်တော် အန်တီကြီးရဲ့စမူစာကိုကိုက် လက်ဖက်ရည်ချိုတစ်ကျိုက်မော့ပြီး ပညာဆည်းပူးခဲ့တာပဲ။ နောက်တော့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကို ဆွေးနွေး၊ ငြင်းခုန် အထုံမပါလို့လားမသိ ခုထိေ၀၀ါးတုန်း။ ခုတော့လည်း ကျောင်းမှာ အန်တီကြီးမရှိတော့ပြီ။ ခုတော့လည်း ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတော်တွေကြောင့် အငြင်းသန်ခဲ့လေပြီ။
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော့ကိုချစ်တတ်အောင်သင်ပေးတာ ဇာနည် ……… အဲလိုဆိုမှားလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ သဘာဝတရားရဲ့အလှ၊ ၀ဏ္ဏပဘာကိုချစ်၊ နတ်ရှင်နောင် ပြာညိုသွယ်… အဲဒါတွေကအစ မိုနာလီဇာ အပြုံးကို အီအီးကုံးချင်တဲ့အကြောင်းအလည် သဘာဝကပေးထားတဲ့ လူတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်ပုံကို အပြစ်မမြင်သင့်တဲ့အကြောင်းတွေ၊ လှည်းအကြီး ခွေးနင်းတဲ့ပုံစံတွေ၊ တိုင်မှာချည်တဲ့နွားအကြောင်းအဆုံး…………. ဘ၀ဆိုတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်ကို ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားတစ်စုံနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာတွေ……………………. ကြုံတုန်း ဒေါက်တာမတင်သန်းကိုပါ
ကျေးဇူးဥပကာတင်တင့်လောက်ပါတယ်။ ဇာနည့်အဆိုအရ အမေသန်းပေါ့။ ဟိုတစ်လောက စိတ်ညစ်တုန်း ဇာနည်ကတရားချခဲ့ပါသေးတယ်လေ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်တွေအရိပ်က စိတ်ပိတ်ကားမှာ ထင်…………ချစ်ခင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိ……..လည်း ဖုန်းခေါ်လို့မရ။ ဖြေသိမ့်စရာ ဒီဝေါ့ပရပ်မှာပဲ အတွေးတွေကိုအံချ………… စိတ်ဒုက္ခပေါ့သလိုလိုဖြစ်သား။ မှန်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်။ မှားခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်။ မှန်နေတာတွေလည်းရှိတယ်။ မှားနေတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဘ၀ဆိုတာ စာတစ်အုပ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က ဘာဆက်ပြီးရေးခြစ်ဦးမလဲ………………။
About Htaik Seng
A tiny person trying to kindling little hope and finding lost soul. Hope I will dare to dream one day.
View all posts by Htaik Seng →
Htaik Seng’s Emotional Life Business